LG Stylo 5: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị | Gam akporosis
LG Stylo 5: Usoro ntinye ọhụụ ọhụrụ
N'oge na-adịbeghị anya, LG webatara ezinụlọ ọhụrụ nke ekwentị, ka a tọhapụrụ ya na India n'oge ahụ. Dị Korea na-aga n'ihu ịgbasa katalọgụ ekwentị ya, yana ụdị ọhụụ. Ha enyela LG Stylo 5 iwu. Anyị na-eche ihu ihe nlereanya n'ime ntinye ntinye ya, dị mfe, ebe ọnụnọ nke mkpịsị pụtara ìhè karịa ihe niile, nke ụlọ ọrụ ahụ jụrụ iwepụ.
Ọ bụ otu n'ime ụdị ole na ole na gam akporo ebe stylus na-aga n'ihu na-enwe ọnụnọ. LG Stylo 5 a agbanwebeghị nke ukwuu ma e jiri ya tụnyere ọgbọ gara aga. Companylọ ọrụ ahụ ewerewo ihe ize ndụ dị ole na ole na nke a, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe nlereanya na-arụ ọrụ ya nke ọma.
Nhazi ahụ agbanweghị nke ukwuu. Firmlọ ọrụ ahụ na-esi na ejiji nke ahịa ahụ pụọ ma hapụ anyị ka anyị nwee ihuenyo na okpokolo agba elu na nke ala na-enweghị akara nke ọkwa. Imepụta dị mfe, mana nke na-enye ezumike maka ndị ọrụ ike gwụrụ nke ọnụnọ ọkwa na ekwentị niile. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ga-atụ uche ụfọdụ ihe ọhụrụ site na ụlọ ọrụ.
1 Nkọwa LG Stylo 5
Nkọwa LG Stylo 5
Na ọkwa teknụzụ anyị na-ahụ ngwaọrụ dị mfe, mana ekwenye. LG Stylo 5 na-ezute ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na ntinye ntinye, ọ bụ ezie na ọnụnọ nke stylus bụ ihe dị iche na ụdị ndị ọzọ na ngalaba a. Ole na ole ụdị nzọ otu, ọ bụ ezie Ndị Korea na-ahụ ụdị ndị a ka ha na-ere. Agbanyeghị n'ọgbọ ọhụụ a, ha etinyela ihe egwu ole na ole ma ha anaghị ahapụ mgbanwe anyị. Ndị a bụ nkọwa ya:
Ihuenyo: 6,2 sentimita asatọ na FHD + Ọhụụ ọhụụ
Nchekwa dị n'ime: 32 GB (gbasaa na kaadi microSD)
Igwe n'ihu: 5 MP
Igwefoto na-aga n'ihu: 13 MP
Sistemụ nrụọrụ: A gam akporo 9 achịcha
Njikọta: LTE, 4G, WiFi 802.11 a / c, Bluetooth 4.2, USB C, minijack, GPS
Ndị ọzọ: Onye na-agụ akara mkpịsị aka azụ, Stylus
Akụkụ: 160 x 77,7 x 8,4 mm
Arọ: gram 179
Dị a nwere afọ ojuju na etu igwe ekwentị a siri arụ ọrụ. Ha na-ahapụrụ anyị otu imewe ahụ na nha ihuenyo dịka ụdị nke mbụ. Ọ bụ ezie na ọ dị n'ime ebe anyị hụrụ mgbanwe ụfọdụ na LG Stylo 5. Ọ bụ ezie otu ihe edebela Snapdragon 450 processor na ya, otu n'ime ndị kasị mma mara na a ahịa nke. Mgbanwe ndị a na-elekwasị anya na igwefoto na ikike batrị anyị nwere na ngwaọrụ ahụ.
Ọ ahọrọla batrị nwere ikike dị elu n'okwu a, 3.500 mAh. Mgbanwe dị mma nke ụlọ ọrụ ahụ, nke na-enye anyị nnwere onwe ka ukwuu na ekwentị. Igwefoto ahụ agbanweela, kpọmkwem igwefoto azụ. Ọ bụ ezie na ọ bụ mgbanwe maka njọ. Ọgbọ gara aga nwere ihe mmetụta 16 MP na n'ọnọdụ a, a na-enye anyị ihe mmetụta 13 MP. N'aka nke ọzọ, iwebata gam akporo gam akporo dị ka sistemụ arụmọrụ bụ mgbanwe ọzọ na ekwentị. Na mgbakwunye, ọ na-abịa na ihe mkpịsị aka mkpịsị aka, nke dị na azụ. Ọtụtụ ụdị dị na mpaghara a enweghị ihe mmetụta, mana ụdị LG a hapụrụ anyị otu.
O yiri ka mmalite nke ekwentị a dị ugbu a na United States. N'ebe ahụ, ọ bụ naanị onye ọrụ Cricket na-arụ ọrụ, bụ nke naanị ya nwere nkwekọrịta ire smartphone a. Enwebeghị nkọwa e nyere banyere mmalite nke ngwaọrụ a na ahịa ndị ọzọ. Yabụ ọ bụ ihe omimi ma ọ bụrụ na ekwentị a nke akara Korea ga-ebupute ya na Spen ma ọ bụ na ọ bụghị. Anyị na-atụ anya ịnwe data n'oge na-adịghị anya.
LG Stylo 5 na-ebupụta na United States na ego nke $ 229,99, nke bụ ihe dị ka euro 205 ịgbanwe. Ọ na-abịa na otu Nchikota RAM na nchekwa na ahịa, 3/32 GB, dị ka anyị hụworo na nkọwa ya. A na-ahapụ ya na agba abụọ: isi awọ na pink. Anyị na-ele anya ịnụkwu banyere mbido mba ụwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG Stylo 5: Usoro ntinye ọhụụ ọhụrụ
Francisco Gamez kwuru dijo
Ndewo, esitere m El Salvador, enwere m LG STYLO 5 ma lee, ha enweghị ike ịhapụ m ya, mmadụ nwere ike inyere m aka
Zaghachi Francisco Gamez
Google Assistant ga-enwe ọhụụ ọhụrụ n’oge na-adịghị anya
Nkọwa izizi nke Realme 3i pụtara ekele Geekbench